Tsvaga zvakanakisa zvipoda zveiyo set-up yezhizha | Bezzia
Zvokuzora zvechirimo tune-up
Susana Garcia | | Runako, Zvigadzirwa zverunako, Runako kurapwa
Zhizha rave pedyo nekona uye isu tave kutotarisira mberi kunakidzwa naro. Ndokusaka tiri kuzokupa iwe dzimwe pfungwa ne makemikari akasiyana siyana ayo akakodzera kugadzirwa kwezhizha. Gore rega rega isu tinorangarira kuti muzhizha isu tinofanirwa kutarisira zuva uye kuratidza zvimwe zvakawanda, chimwe chinhu chinogona kutishungurudza, asi kune zvakawanda zvekuzora pamusika zvinotibatsira kuve nani uye tinzwe zvirinani pamusoro pedu.
Kune zvimwe zvinhu izvo iwe unogona here kuita kutaridzika zvakanaka zhizha rino uye ufare nazvo sezvakakodzera. Zvizoro zvakasiyana siyana zvinogona kuve chikamu chezviitiko zvako zhizha rino. Pasina kupokana pane zvakawanda zvinongedzo zvinogona kurapwa asi isu tichaenda kungoona chete zvimwe zvekuzora zvaunofanira kufunga nezvazvo.
1 Kuzvichenesa-pachako Solvene Solar Inopisa Gel
2 Shea Butter Muviri Kukwesha kubva kuMutumbi Shopu
3 Moroccanoil Hydrating Bvudzi Mask
4 Calvin Klein CK Rimwe Zhizha Fragrance
Kuzvichenesa-pachako Solvene Solar Inopisa Gel
Chimwe chezvinhu zvinoitika kana zhizha rasvika ndezvekuti tinoda kuratidza zvishoma tani, asi izvi zvinongowanikwa chete nenguva. Ndokunge, hazvina kuchengetedzeka kuzuva nekuchengetedzwa kudiki, izvo zvisingavimbise toni yakanaka yeganda futi. Chinhu chakanakisa chatingaite kuratidza kara diki paganda neaya epfupi emumvuri wehembe kupfeka ndeye kushandisa yakapfava kuzvigadzira iyo inotipa imwe toni uye isingakonzere matambudziko paganda.
Àvene ine yekuzvigadzira-svinura inovawo gel inonyorovesa, ine nyore kuparadzira magadzirirwo ayo anopararira zvakanyanya uye anosiya ganda rakapfava uye riine hydrated. Iyo inozvimiririra yekuzvigadzira-ganda kune inoonekera ganda iyo iyo mhando ine hunyanzvi uye zvakare inopa kudzikamisa mhedzisiro. Iyo ine yakajeka, isina-greasy mameseji ayo anosiya ganda rinotaridzika rakakura mushure mekushandisa.
Shea Butter Muviri Kukwesha kubva kuMutumbi Shopu
Kana paine chimwe chinhu chaunofanirwa kuita nguva yezhizha isati yasvika kuti unakirwe neyakanakisa tan, ndiko kutanga kukwesha muviri. Iyo kukwesha kunogona kushandiswa kamwe kana kakawanda pasvondo kuzadzikisa kutsetseka kupera paganda. Iwe unozoona musiyano mukuru mune izvi, kwete chete kana zvasvika pakuwana tan, asiwo kana uchizora zvimwe zvako zvekuzora, nekuti zvinopinda mukati meganda zvirinani.
Vanos ivo vanonyanya kuda izvi zvigadzirwa kubva kuThe Body Shop nekuti ine akawanda magadzirirwo, hwema uye nemhando dzakasiyana dzezvigadzirwa zvemuviri. Izvo zvinogadzirwa neshea bhata zvinozivikanwa nekuti zvinobatsira kuchengetedza ganda zvakanaka hydrated. Nenzira iyi isu hatisi kungoburitsa chete asi zvakare tinotarisira ganda panguva imwe chete. Iyo ine giraidhi dhizaini uye isinganzwisisike nutty kunhuhwirira. Inosiya ganda rakapfava ne hydration uye rakanakira kuita tanning.
Moroccanoil Hydrating Bvudzi Mask
ari Zvigadzirwa zveMoroccanoil zvave kunyanya kufarirwa nekutenda kumhedzisiro yazvo pane bvudzi rakaoma uye nechengetedzo inopihwa nemitsetse yayo. Iyi hydrate kurapwa inorerutsa uye kudzorera yakaoma uye yakakuvadzwa bvudzi nekuda kweanobatsira argan mafuta, mafuta akapfuma kwazvo mune zvinovaka muviri ayo anoshandiswa mune akawanda ma cosmetics nekuti anonyorova zvikuru. Munguva yezhizha, vhudzi rinowanzo kuoma zvakanyanya, saka zvakakosha kuti uripe iyo hydration yainoda nerudzi urwu rwechigadzirwa.
Calvin Klein CK Rimwe Zhizha Fragrance
Zhizha rinodawo hwema hwaro, nekuti hatishandisi hwema hwakafanana nehwechando. Panguva ino tinoda zvinonhuhwirira zvakapfava, zvinonyatsonhuwirira kunge zhizha, saka pane zvigadzirwa zvinounza mavhezheni avo, saCalvin Klein, ane hwema CK Imwe yakasarudzika, iyo ikozvino zvakare ine yayo yezhizha vhezheni. Iko kunhuwirira nekunhuhwira kwemaranjisi, nemazano emonimu, grapefruit, watermelon kana pichisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Zvokuzora zvechirimo tune-up
Pasita gratin ine romanesco
Enda kumberi uye uve nemuchina wekukwasva pamba